Bangladesh oo meesha ka saartay erayga "bikro" ee ku qoran warqadda diiwaan galinta guurka - BBC News Somali
Bangladesh oo meesha ka saartay erayga "bikro" ee ku qoran warqadda diiwaan galinta guurka
28 Agoosto 2019
Dumarka Bangladesh ayaan hadda ka dib lagu xirayn in ay qirtaan in ay bikro yihiin marka ay buuxinayaan waraaqaha diiwaangalinta guurka, sida ay go'aamisay maxkamadda sare ee dalkaas.
Maxkamada sare ayaa amartay in erayga "bikro" lagu badalo "aan la soo guursan" ereyada kale ee aan la badalin ee isla warqadda diiwaan galinta arooska ku qoran ayaa kala ah "laga dhintay" iyo "garoob".
Qolyaha u dooda xuquuqda dumarka oo ku doodayay in erayga "bikro" uu waji gabax keenayay ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay maxkamaddu gaartay Isniintii.
Arrintaas ka duwanna, maxkamadda ayaa amartay in hadda ka dib caruurkuna uu sheego xaaladdiisa guur.
Gabadhii nafteeda ku weysay arrin Soomaaliya caan ka ah
India: Dumarka quruxda u tartamaya maxaa isku wada ekaysiiyey!
Qolyaha xuquuqda dumarka u dooda ayaa shuruucda guurka ee dalka Bangladesh ku eedeeyay mid xadidaad samaynaya isla markaasna faquuq ah.
Bangladesh waxaa aqlabiyad ka ah Muslimiinta.
Gabdho badan oo dalkaas ku nool ayaa lagu qasbay aroos loo go'aamiyay iyaga oo aad u da'yar.
Maxkamaddu maxay go'aamisay?
Maxkamadda ayaa sheegtay in erayga luuqadda Bengali ee "kumari" laga saaro waraaqaha diiwaangalinta guurka.
Eraygaas ayaa loo adeegsan jiray dumarka aan la qabin, balse wuxuu yeelan karaa macno kale oo ah "bikro".
Qareennada dacwadan geeyay maxkamadda sannadkii 2014 ayaa sheegay in waraaqaha diiwaangalinta guurku ay yihiin kuwo bahdil ah isla markaasna meel ka dhac ku ah xogta gaarka ah ee dumarka.
Axaddii ayay maxkamaddu sheegtay in ay waajib tahay in la adeegsado erayga "obibahita", ee afka Bengali-ga kaas oo macno ahaan noqonaya "haweenay aan guursan", isla markaasna meesha laga saaro "kumari" ama bikro.
Go'aan kale oo maxkamadda ka soo baxay ayaa isna lagu go'aamiyay in ragga guursanaya ay iyaguna qoraan, aan guursan, furay ama xaas hore ay ka dhimatay.
Isbadalladan ayaa dhaqan galaya bilo gudahood, waana marka ay maxkamaddu si buuxda u daabacdo go'aankeeda.
"Waa go'aan taariikhi ah," ayaa laga soo xigtay in ay tiri Aynun Nahar Siddiqua oo ka mid ah qareennadii ku hawlanaa dacwaddan.
Waxay sheegtay in ay rajaynayso in tallaabadani ay sare u qaaddo xuquuqda dumarka Bangladesh.
Dhanaka kalana mid ka mid ah dadka ka shaqeeya diiwaangalinta guurka ayaa sheegay in isaga iyo saaxiibbadiisa shaqaduba ay sugayaan in dawladdu ay si rasmi ah ugu soo sheegto isbadalka diiwaangalinta lagu samaynayo.
"Guurar badan oo Dhaka ka dhacay ayaan diiwaangaliyay, mar kastana waxaa la i waydiin jiray sababta ay raggu xor ugu yihiin in aysan ka hadlin xaaladdooda guur dumarkana ay uga maqan tahay xoriyaddaas. Mar kaste waxaan u sheegi jiray in arrintaas ay awoodayda ka baxsan tahay," ayuu wakaaladda wararka ee Reuters ku yiri Moxammad Cali Akbar Sarker oo diiwaan galiya guurka.
"Waxaan qiyaasayaa in ay istaagi doonto waydiinta su'aashaas," ayuu intaas ku sii daray.